COPA AMERICA: Argentina oo iska xaadirisay wareega sideed dhammaadka…(Messi oo saddexleey ka kacay isagoo badel ku yimid)+SAWIRRO – Gool FM
(America) 11 Juunyo 2016. Xulka Argentina ayaa gaaray quarter-final-ka Copa America kaddib markii ay 5-0 uga adkaadeen xulka Panama.
Qeybtii hore ee ciyaarta ayaa lagu kala maray 1-0.
Bilwoga ciyaarta daqiiqadii 7-aad ayay hogaanka qabatay oo waxaaa gool u dhaliyay daafaca Man City Goal Nicolás Hernán Otamendi kaddib laadka xorta ah uu soo qaaday Di Maria isla markaana uu madaxa la helay.
Intaan la marin qeybtii hore ee ciyaarta daqiiqadii 31-aad ayaa waxaa kaarka cas ka qaatay xulka Panama Aníbal Cesis Godoy kaddib markii ay labo kaar oo jaale ah isugu tageen.
Markii la isku soo laabtay qeybtii labaad ee ciyaarta waxaa daqiiqadii 61-aad badel ku yimid kabtanka xulka Argentina Lionel Messi oo isagu maqnaa kulankii furitaanka dhaawac dartii waxaana lagu soo badelay Augusto Matías Fernández.
Waqti badan kuma ay qaadan Messi inuu shabaqa tago oo 7-daqiiqo uun kaddib wuxuu ka faa’iideystay qalad ay sameeyeen daafacyada xulka Panama isagoona ka dhigay ciyaarta 2-0.
Lionel Messi ayaa markale shabaqa tagay daqiiqadii 78-aad ee ciyaarta markan waa gool qurux badan oo wuxuu dhaliyay free kick lagu galay isla isaga wuxuuna ka soo dhaliyay goosha meel 25-yard u jirta.
Argentina lagama badin 11-kii kulan ee ugu dambeysay marka laga tago kulankii rigoorooyinka, waxay badisay shan halka lix jeerna ay bar-baro gashay.
Lionel Messi ayaa dhaliyay goolkiisii saddexaad isagoo waliba badel ku yimid kaddib caawimaad uu ka helay Marcos Rojo, wuxuu maray daafac dabadeedna cag ayuu dhinac ka dhigay goosha.
Messi ayaa noqday laacibkii labaad ee badel ku soo gala Copa America isla markaana dhaliya saddexleey kaddib Paulo Valentim 1959.
Waa kulankii ugu horreeyay oo ciyaar rasmi ah uu Messi ku ciyaaro Mareykanka oo kulamo saaxiibtinimo unuu ku ciyaari jiray.
Goolka shanaad ayaa waxaa ciyaarta ku soo xeray Sergio Aguero oo isna badel ku yimid, Messi ayaa la cararay oo u dhiibay Marco Rojo oo markale caawiyay gool iyadoo uu si sahlan uu u dhaliyay weeraryahanka Man City.
COPA AMERICA: Arturo Vidal oo guul soo daahday ku hogaamiyay xulka Chile....+SAWIRRO